काठमाडौं, २५ असोज । चर्चित हास्यकलाकार मनोज गजुरेलले विवाह गरेका छन् । न्याय सेवाकी अधिकृत मञ्जु पोखरेलसँग उनले सोमबार विवाह गरेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस र तस्वीर राख्दै गजुरेलले आफूहरु विवाह बन्धनमा बाँधिएको बताएका छन् । मनोज र मञ्जुले भक्तपुरको डोलेश्वर मन्दिरमा विवाह गरेका हुन् ।
उदाउँदै अनि अस्ताउँदै...
कहि कतै छुटेका छन्
यादहरूका सागरमा तैरिरहने
ती माेतिका दानाहरू
उदाउँदै अनि अस्ताउँदै
बगिरहेका जीवनका धारामा
चुप चाप खिइद‌ै गएका
फेरि पनि सम्झनु त छदैछ
भेटिदैनन ती दाैतरीहरू
जसरि भेटिएनन हातबाट छुटेपछि
क्षितिजमा उडेका ति बेलुनहरू
यति खेर डाडा माथि
फेरि घाम अस्ताउँदैछ
म मुस्कुराउदै कुरिरहेछु
भाेलिकाे एउटा बिहानी
जहाँ गाैथलिका बचेराहरू
समयका बेगलाई पखेटामा लिएर
त्यसरी नै उडिरहेछन
म समयकाे तुफानसँगै
पाैठेजाेरि खेलेर उभिएकाे
त्यहि एउटा बुढेा वृक्ष हुँ
जाे जीवनका अनगिन्ति घुम्टिहरू छिचाेलेर
बिस्तारै बिस्तारै ढल्दैछु
जीवनका अनगिन्ति गितहरू
यसरी नै गुन्जिरहेछन
आउनु र जानुकाे बीचमा
केही सम्झनाहरूलाई छाडेर
रुपा थापाको फेसबुकबाट
काठमाडौं, २३ वैशाख । वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार प्रेमध्वज प्रधानको निधन भएको छ। बिहीबार सुन्धारास्थित काठमाडौं न्यूरो अस्पतालमा उनको निधन भएको हो। गायक प्रधानको छातिमा सामान्य समस्या देखिएपछि बिहीबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। सामान्य ज्वरो र छातिमा समस्या देखिएपछि कोरोना आशंका गरिएको भए पनि उनको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ।
प्रधानका ‘घुम्तीमा नआउ है’, ‘तिमीलाई अचेल कहाँ देखुँ’, ‘गोरेटो त्यो गाउँको’, ‘‘पर लैजाउ फूलहरु’, लगायतका गीत चर्चित छन्।
८३ वर्षीय प्रधानको जन्म सन् १९३८ मा सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा भएको थियो। प्रधान आमा प्राणदेवी प्रधानको प्रेरणामा संगीतमा लागेको बताउथे।
नेपाली गीत शक्तिका शिखर व्यक्तित्व प्रधानले विभिन्न राष्ट्रिय सम्मान पाएका थिए। २०२१ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको हातबाट उत्कृष्ट गायक सम्मान, राजा वीरेन्द्रबाट २०४४ सालमा गोर्खा दक्षिण बाहु चौंथो र २०५३ सालमा विख्यात त्रिशक्ति पट्ट तेस्रोसँगै गायक प्रधानले छिन्नलता पुरस्कार, भुपालमान सिहं कार्की पुरस्कार, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, नारायण गोपाल संगीत पुरस्कार, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारलगायत दर्जनौ सम्मान र पुरस्कार पाएका थिए।
काठमाडौं, २७ माघ । भारतीय अभिनेता राजीव कपूरको निधन भएको छ । उनको मंगलबार हृदयाघातका कारण निधन भएको उनका ठूला दाजु रणधीर कपूरले बताएको बीबीसीले जनाएको छ ।
५८ वर्षका राजीव राज कपूरका कान्छो छोरा हुन् भने रणधीर कपूर र ऋषि कपूरका भाइ हुन् । उनले राज कपूरको फिल्म ‘राम तेरी गंगा मैली’ बाट फिल्मी यात्रा शुरु गरेको थिए । ऋषि कपूरको निकै चर्चित फिल्म ‘प्रेम ग्रंथ’ लाई राजीव कपूरले निर्देशन गरेका थिए ।
काठमाडौं, ४ असोज । यस वर्षको मदन पुरस्कार ‘महारानी’ उपन्यासका सर्जक चन्द्रप्रकाश बानियाँलाई प्रदान गरिने भएको छ । मदन पुरस्कार गुठीको आइतबार बसेको बैठकले बानियाँको उपन्यास ‘महारानी’लाई मदन पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै, सभाले गत छ दशकदेखि नेपाली गीत–सङ्गीत क्षेत्रमा समर्पित रही विशिष्ट योगदान पु¥याएवापत गायिका तथा सङ्गीतकार शान्ति ठटाललाई २०७६ सालको जगदम्बा–श्री पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ । ।
यस्तै २०४५ सालदेखि गुठीले जगदम्बाश्री पुरस्कार दिन थालेको हो । सो पुरस्कार पहिलो पटक गायक तथा सङ्गीतकार नारायणगोपाललाई प्रदान गरिएको थियो । बानियाँ र ठटाललाई गुठीले एक कार्यक्रम आयोजना गरी पुरस्कार प्रदान गर्नेछ।
काठमाडौं, ४ असोज । आइतबार देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपाल भन्दा दक्षिण तर्फ अवस्थित छ । अहिले बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशमा आंशिक बदली रहेको छ । आइतबार दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामन्य बदली रही थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
यस्तै राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश १, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन् ।
बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशमा आँशिक बदली रहेको छ ।
राती : देशभर आँशिक देखि सामान्य बदली रही प्रदेश १, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
राती : देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । साथै प्रदेश नं १, प्रदेश नं २ र बाग्मती प्रदेशका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
दिउँसो : देशभर सामान्यतया बदली रही देशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । प्रदेश नं १, प्रदेश २, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
राती : देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । प्रदेश नं १, प्रदेश २, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
उल्लेखनीय चेतावनी छैन ।
नीलो गुलाफ (कथा )
पुल तरेर पारी पुगेपछि अकस्मात पानी पर्यो। यो पानीलाइ यतिबेला नै किन पर्न परेको होला ?। गर्मी थियो। त्यसैले पर्यो। पर्नु उस्को धर्म हो। भिज्नु हाम्रो बाध्यता । छाता थिएन। छाता नहुनु हाम्रो कमजोरी । तर हिंड्दा आकाशमा हेरेकै हो। खाली थियो आकाश । थिएन कतै उडन्ते भुवा । म भिजे । उनी भिजिन। बाटो भिज्यो। घासहरु भिजे। बाटो चिप्लो भयो । जस्तो रुदा आँखाको कोष भिज्छ लपक्कै। आँखा रुदा गालाको भिर भिजे जस्तै भिजिरह्यो त्यो पहाड । ओत लाग्ने स्थान थिएन। म पछि छु। उनी अघि छिन। पहाडी बाटो । रातो माटाे । एउटा रुख आयो। बाक्लो हागाबिगा भएको । एक झर पानी ओत्ने। उनको लुगा निथ्रुक्क भिजेको थियो। कपालबाट पानी तर्किरहेको। जिउमा लुगा टासिदा अर्कै राम्री।एउटा अर्कै सुन्दरता। कस्तो गुलाफी मुहार । पानी पर्दा भिजेर उठेको त्यस्को इन्द्रेणी । सर्वाङ्ग भिजेकी। उन्को निदार।अर्ध चन्द्रमाकारको। उन्को सर्वाङ्गतामा एउटा माद थियो।
कस्तो बैशाखी आँखा। पानीले भिज्दा अलिकति उठेको उन्को वक्षस्थलअर्कै झन्झनाहट । अर्कै इन्द्रेणी । अर्कै उभार। भिजिरहन मन लाग्यो। पानी बौलाहा हो। म पनि बौलाहा हु। यो सारा सारा उत्ताउलो उभार उत्ताउलो जगत। यसरी पहिलो चोटि भिज्दै छु म प्रकृतिसग । अलिकति बाटो लम्बिदिए हुन्थ्यो । अलिकति समय लम्बिदिए हुन्थ्यो । सारा कम्पन । यो खुसीको चपल दहमा पौडिन मन लाग्यो। धोइएको शरीरबाट प्राकृतिक अत्तर मगमगाइ रहेको छ । छोउ छोउ लाग्यो। बोलाउन मन लाग्यो। पानीको सरसराहटले म बोलेको उनी सुन्दिनन। कानैमा गएर तातो श्वास फ्याक्तै भने -
"ओत लागौन है ! "
उनी रोकिइन। मलाई हेरिन। मुस्कुराइन। रुख नजिकै पुग्यौं । पानी झन बढ्न थाल्यो। बादल उडिरहेको आकाश । कुहिरोले छोपेको पहाड । अलिकति पर पनि केही देखिन्न। चकमन्न् छ। एकान्त छ। यो निकटता पनि किन यति मीठो ! सिर्सिर बतास छ्ल्केको छ उनको कपालबाट । उनी चिसो अनुभुत गरिरहेकि थिइन । त्यो कालो केशरासी हावाले उडाएर बिगारिदियोस भन्ने चाहन्थे म। अहिले त पानीले भिज्यो। पानीको छिटाले भिजाएको त्यो दिब्य मुहारमा मेरो खुसीको मखमली छल्केको छ। हावाको बेगसगै दर्किरहेको छ। छड्के पानीको धारले रेटेको छ उनको छिनेको कम्मरलाई। सलक्क परेको रुखको फेद। त्यही फेदको फेरोलाइ च्याप्प समातेर उभिरहेका हामी दुई । निरन्तर हावाको झोक्काले छोइरह्यो उनलाइ। पातलो हावा तर चिसो । पानीको कण मिसिएको। जहाँ छुन्थ्यो हावाले म त्यतै हेरिरहन्थे। मलाई हावाको छुवाइ देखेर ईष्र्या लाग्न थाल्यो।
मलाई छलेर उन्लाइ छुने त्यो बतास । अह मलाई मन परेन। तर बेला बेलामा त्यो प्रबेगले सलक्क अगाडि आएको कपाललाइ पछाडि धकेलिदिन्थ्यो। खोइ किन पो हो मलाई यो दृश्यले निकै रोमाञ्च बनाउथ्यो। निधारबाट ओठ हुँदै चिउडाेबाट तप्किरहेको पानी हेर्दै छु। कस्तो आनन्दको त्यो मुहार। त्यसमाथी पनि मलाई हेरेर मुस्काएको त्यो कम्पित आँखा ।
गाजलको धार बगेर तप्केको पानी । अन्जुलीमा थापे। सगै छौ। छोइएको छौ।पानीको पातलो धर्सा बगिरहेको छ हाम्रो छुवाइ बिचबाट । इन्द्रेणी पर्यो।पारी शिव मन्दिर छेउमा । आउने जाने कोहि छैन।बाटो एक्लै छ। यो बिराट पृथ्वीमा हामी एक्लै एक्लै । आहा ! हामी । यो हामी भित्रको एकै किरण । एकै उज्यालो !!
अगाडि देखिएको पुल एक्लै छ। सगै सगै उभिएका रुखहरु साक्षी छन। हामीले छोएको यो रुखलाइ अरु रुखहरुले हेरिरहे जस्तो लाग्यो। एउटा पुरुष मनको अगाडि उभिएको स्त्री स्वरुप ! अलिकति लज्जा ।अलिकति संकोच ।अलिकति डर। अलिकति सन्देह । अलिकति माया । अलिकति काउकुती सबै सबै मिसिएको । पानी झन झन बर्सिदिए हुन्थ्यो भनेर सोचे। भुइ कुहिरो अझै बाक्लो गरेर लागिदिए हुन्थ्यो भनेर सोचे। समय अझै लम्बिदिए हुन्थ्यो भनेर सोचे। मनभित्र सोचाइको नदी उर्लिन थाल्यो। यो एकान्त कति प्यारो । यो घनघोर बर्षा कति मीठो । उनको यो सामिप्यता कति मीठो । त्यो छल्केर चिसो बोक्तै डुलिरहेको हावा कति प्यारो। प्यारो मान्छेसग उभिदा सगै उभिएको त्यो पहाड अझै कति मायालु ।
पानी थामिएन। नथामियोस पनि । भुइ कुहिरो हटेन नहटाेस यो पनि । हामीलाई कसैले नदेखुन। हामी कसैलाई नभेटु। यो समय किन यति धेरै प्रीतिकर लागेको । पानीले गाएको गीत किन यती प्रीतिकर । निथ्रुक्क छिन उनी। लाली पखालिएको पानी चुहिनु अनौठो त के होर । गाजल पखालिएको पानी आँखा भएर बगिदिनु त के हो र! तर ती सबै दृश्यले अकिन्चन आक्रमण गरिरह्यो मलाई । आँखा पखालिएको पानी । आखाको नानी छोएर बगेको बतास । त्यही रोकिदिउकी जस्तो लाग्यो। नजिकै छौ। यति नजीक कि हामीले फेरेको श्वास पनि सुन्छौ एक अर्काको । धड्कन धेरै बडेको सुने उन्को। सगै छौ हामी । सपक्कै टासिएर पानी छल्दै उभिएको रुखको फेदमा ।
आनंद के यहि हो ? उत्फुल्लता के यहि हो ? यो के हो ? अलिकति माद लागे जस्तो। धेरै त मायाको नशा लागेजस्तो । मुहारको दिप्ती यति बलिरह्यो कि वरिपरि नै बले जस्तो। नजरबाट बिस्तारै उठेर आयो एउटा अनमोल उभार। त्यो चकमन्नतामा एक्कासि बोलेछु-
"मैले मागेको दिन्छ्यौ" ?
प्रश्न नसकिदै मौन स्वीकृति आयो। म खुसी भए । शायद यति धेरै खुसी पहिलो चोटि हुँदैछु । मुटुको धड्कन बढ्यो। श्वास फुलेर आयो मानौ प्रभातको कलिलो घामले फूललाइ छोइरहेछ।ओठ छोएर बगिरह्यो त्यतिनै बेला एउटा कलिलो हावा । अलिकति मिसिएको थियो सुगन्धित मायाको अत्तर । महकायो सारा परिदृश्य । भुइ कुहिरो डम्म लागेको थियो। रुखको हागाबाट तप्केको पानी हामी दुवैको ओठमा परिरहेको थियो। एकछिन त केही सुनिएन। शुन्य जस्तो । कहि कतै केही देखिएन। भुइँ कुहिरोले सघायो हाम्रो शरीरलाई छोप्न। वरिपरि उठेर हेरिरहेका घाँसका मुनाहरु पनि आफै लजाए । त्यो नीलो गुलाफी बैँस जगमगायो।
एकान्त पनि यति प्रीयकर लागेको यो पहिलो चोटि हो। उन्को आखाको भृकुटीबाट एउटा उज्यालो छायां मै तिर बिस्फारित भयो। रुखबाट एक जोडी चरी पारी भुरुरु उडेर गए। भुइ कुहिरो बिस्तारै हट्न थाल्यो। पारी शिवालय मन्दिर अलिकति देखिन थाल्यो। पानी थामियो। पारी मन्दिरमा बजेको घन्टको प्रध्वनीले एउटा अर्कै प्रमोदिता लहराउन थाल्यो कानमा ।
असरल्ल परेको कपाल मिलाउदै कम्पित स्वरले बोल्छिन उनी -
" पानी त थामियो नि अब जाने होइन ?"
केहिबेर अघिको बोली र अहिलेको बोलिमा फरक छ उनको।पहिलेको बोली प्यास मिसिएको बोली । अहिलेको बोली तृप्तीको बोली । अहिलेको आवाज मधुरता मिसिएको आवाज। अहिलेको कम्पन माया मिसिएको कम्पन । पहिलेको ध्वनि चाह मिसिएको ध्वनी । अहिलेको ध्वनि प्राप्तिको ध्वनि । गुलाफ भिजे जस्तै त्यो मुहारको दिब्य दर्शन पाउँदा आज कति खुसी भए म । कस्तो यो तृप्तीको झन्कार ! सरदको तारबाट बजिरहेको सुखद आलाप जस्तै । शरीर भरी भरी भरिएको आनंद बिसाएर शान्त निर्मल आकाश जस्तै स्वच्छ सानन्द भए म । अघिअघिको तातो सबै सबै निख्रीएर एउटा प्रशान्त उज्यालो तर्फ लम्कियौ हामी । भुइ कुहिरो हट्यो बल्ल देखिए घरहरू । पृथ्वीबाट न्यानो बाफ माथी माथी नीलो आकाश तर्फ उठिरहेको थियो। अस्तु !!!
(लक्ष्मण सिटौलाको फेसुबुकबाट साभार)
सुरक्षा सावधानी अपनाएर रक्तदान गर्न आह्वान
काठमाडौं, १२ भदौ । सरकारले सुरक्षा सावधानी अपनाएर रक्तदान गर्न आह्वान गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयल अन्तर्गतको राष्ट्रिय रक्तसञ्चार ब्यूरोले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना निकालेर रगतको अभाव भएकाले रक्तदानका कार्यक्रमलाई नियमित गर्न आग्रह गरेको हो ।
बिरामीलाई आवश्यक रगत उपलब्ध गराउन निकै कठिन भएकाले आवश्यक सावधानी अपनाएर सबै रक्तदाताले रगत दान गर्न सूचनामा आग्रह गरिएको छ । कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि अहिले रगत संकलन हुन सकेको छैन ।
यस्ता छन् अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ओबामालाई मनपर्ने गीतको सूची
एजेन्सी । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफूलाई मनपर्ने गीतको सूची सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले हरेक वर्ष आफूलाई मनपर्ने वर्षका उत्कृष्ट किताब र चलचित्रको सूची पनि सार्वजनिक गर्ने गर्दछन् । जसमा सो वर्ष रिलिज भएका गीत, चलचित्र र किताबहरु पर्ने गर्दछन् ।
ओबामाले इन्स्टाग्राममा वर्ष २०२० का मनपर्ने गीतहरुको सूची सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्, “पछिल्लो केही महिना परिवारसँगै बसेर गीत सुन्दै बिताएको छु । यसमध्ये मलाई मनपर्ने केही समर कलेक्सन तपाईसँग सेयर गर्न चाहन्छु । यस हप्ताको डेमकन्भेन्सनमा प्रस्तुती दिएका कलाकारहरुको सहित । सधैजस्तो, यो विभन्‍न युग पार गर्दै आएका विभिन्‍न विधाका मिश्रणहरु छन् । मलाई लाग्छ कि यहाँ सबैका लागि केही छ( आशा छ तपाईले रमाइलो गर्नुभयो ।”
राष्ट्रिय झण्डा जलाएको म्युजिक भिडियो बनाउने पक्राउ
काठमाडौं, २ भदौ। राष्ट्रिय झण्डा जलाएको म्युजिक भिडियो बनाउने एक जना पक्राउ परेका छन् । महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले भिडियो खिच्ने क्यामरा पर्सन ललितपुरको नखिपोट बस्ने इशाक लिम्बुलाई पक्राउ गरेको हो ।
मंगोल हप अफिसियल नामक युट्युब च्यानलबाट सोमबार जातीय गाली गलौज गर्दै झण्डा र नेताहरुको फोटो जलाएको फोटो ज‍लाएको गीत भिडियो सार्वजनिक गरिएको थियो ।
युट्युवमा हालेलगत्तै यसमा तीव्र प्रतिक्रिया आउन थालेका थिए ।